“Shiinuhu waxay danaynayaan Somaliland malaa dalkeena wax aynaan ku ogayn ayay ku og yihiin” | Somaliland.Org
Weftigan waxa wajaale ku soo dhaweeyay Xoghayaha guud ee xisbiga KULMIYE Xasan Siciid Yuusuf, Agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta Faysal Cali Sheekh, Madaxa baratakoolka madaxtooyada Maxamed Cilmi, Xildhibaano ka tirsan Wakiilada, maamulka gobolka Gabiley iyo Taageerayaal badan.
Guddoomiyaha xisbiga talladda haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo hadal kooban u jeediyay degmada Wajaalle, waxaanu si weyn ugu mahad celiyay taageereyaashii iyo masuuliyiintii soo dhaweeyay,
Muuse Biixi waxa uu si kooban uga hadlay socdaalkii ay ku tageen wadanka Shiinaha, waxaanu sheegay inuu halkaasi ku soo arkeen dad aad u danaynaya Somaliland.
“Waxaanu tagnay dalka Shiinaha oo wadan weyn ah waxay aad iyo aad u danaynayaan dalkeena, dadkaasi malaa dalkeena wax aynaan ku ogayn ayay ku og yihiin mid walibana wuu ku waydiinayaa wadankeena oo waan imanayaa ayuu ku odhanayaa. Shiinuhu dalkeena siday u danaynayaan waad yaabaysaa.”ayuu yidhi Gudoomiyaha KULMIYE.
Muuse biixi wuxuu sheegay inay ganacsato badan oo u dhashay wadanka Shiinuhu ay dhawaan socdaal ku iman doonaan Somaliland.
Weftiga Guddoomiyaha waxa kale oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley. Weftigan waxa xubno ka ahaa Afhayeenka xisbiga KULMIYE Maxamed Kaahin Axmed iyo Axmed Cabdi dheere oo ka mid ah qurbo-jooga xisbiga KULMIYE.
Previous PostWasiirka Qorshaynta oo ka hadlay Go’aan ay soo saareen gudiddii bilicda Caasimada HargeysaNext PostWasiirka Caafimaadka Oo Ha’yad Sucuudi ah kala gudoomay deeq dawooyin ah	Blog